shankalay13: May 2010
လှပစွာလူးလွန့် လို့ ........
ကိုယ်သင်းနံ့ နဲ့ဝင်ကြွားစွာသွားနိုင်အောင်
ငါ့နှလုံးသားလဲ မင်းကြောင့် နိုးထခဲ့တယ်။
လေအတိုက်မှာ ရိပ်ခနဲ့ ငါ့ရင်ထဲ
ခွင့်လွှတ်ပါလို့ငါတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 8:15 AM No comments:
မိုးတွေနဲ့ အတူ ရင်မှာလောင်ကျွှမ်းကာ
တမ်းတရခဲ့မိ ဤအချစ်ရဲ့ မီး။
နေ့ စဉ်ရက်တွေတိုင်း မျှော်လင့်နေကာဖြင့်
ရက်တွေတာကုန်လို့နှစ်တွေကူးသွားလဲ
နာရီတွေရပ်တန့်ခံစားချက်မဲ့လို့ 
မင်းစိတ်တွေပြောင်းလို့ပြန်ပြီးပေါင်းချင်ရင်
ငါထိုင်စောင့်နေတာ အဖေါ်မဲ့လို့ ကွာ
Posted by Shankalay or Sai Sai at 8:02 AM No comments:
အားလုံးနဲ့ မခြား ရုန်းဆန်ခက်ကာ
Posted by Shankalay or Sai Sai at 8:28 AM No comments:
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက အလွန်ရင်းနှီးသော သူဌေးနှစ်ယောက်သည် ၄င်းတို့ သား၊သမီးများကို လက်ထပ်ပေးရန် ဆွေးနွေးကြလေ၏။ သို့ နှင့် သမီးများသာ ရှိခဲ့ပါက သူ့ သမီးကု ကိုယ်ယူ၊ ကိုယ့်သမီးကို သူယူဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်။
ထင်သည့်အတိုင်းပင်.. ၄င်းတို့ တွင် သမီးများသာ ဖွားမြင်ကြလေသည်။ တို့ နှင့် သူဌေးတစ်ယောက်မှာ သူ့ သမီးအား အဖေအရွယ် သူဌေးနှင့် ပေးစားရမည်ကို စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေလေ၏။
ထိုအဖြစ်ကို တွေ့ သော သမီးက အဖေကို မေးမြန်းသောအခါ... သူဌေးကလဲ အကြောင်းစုံပြောပြလေသည်။ သမီးဖြစ်သူကလဲ ဖခင်ကို မပူပင်ရန် ပြောပြပြီး.. သူဌေးကြီး သူငယ်ချင်းကို သွားလည်လေသည်။
ထိုသို့ သွားစဉ်..လမ်းခရီး တစ်ဝက်ရောက်သောအခါ မိုးချုပ်လာသဖြင့် သူဌေးသမီးသည် ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်တွင် ခိုလုံကာ စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေလေသည်။
ထိုအဖြစ်ကို မြင်သော ယောက္ခစိုးကြီးက ကိုယ်ထင်ပြကာ..
“အို...မိန်းကလေး ဘာတွေများသောကရောက်နေလို့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေသလဲ?”
ထိုအခါ သူဌေးသမီးက ငိုယိုကာ..
“ကျမကို ကူညီပါယောက္ခစိုး မင်းကြီးရယ်” ဟု ဆိုကာ အကြောင်းစုံရှင်းပြလေ၏။
“အရင်.... ကျမကို အောက်ပိုင်းဌားပေးပါ... ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့အခါ ကျမပြန်လာပြီး လာပြန်လဲပါ့မယ်” ဟုတောင်းဆိုလေသည်။
ထိုအခါ ယောက္ခစိုးမင်းကြီးလဲ အားနာကာ အောက်ပိုင်းကို ဌားပေးလိုက်လေသည်။
ထို့ နောက် မိုင်းလင်းသောအခါ... သူဌေးသမီးလဲ တခြားသူဌေးဆီသို့ ရောက်သွားလေသည်။
ရောက်ပြီးသောအခါတွင် သူဌေးသမီးမှာ အလွန်ချောမောသဖြင့်... အချင်းချင်းချစ်ခင်စုံမက်ကာ ပျော်ရွှင်စွာရာသက်ပန် နေထိုင်သွားကြလေသည်။ (happy ending ပေါ့ဗျာ)
ယောက္ခစိုးကြီးမှာ သူဌေးသမီးပြန်လာမည့်အချိန်ကို စောင့်နေသည်မှာ လ မှ နှစ်တို့ ပြောင်းသွားသည့်တိုင် သူဌေးသမီး
ပြန်မလာသဖြင့် အပေါ်ပိုင်းက ယောင်္ကျား...အောက်ပိုင်းက မိန်းမ ဖြင့်နေသွားရလေသည်။
ထိုချိန်မှစ၍ အားနာလျှင်ခါးပါသည်ဆိုသော... စကားပေါ်ပေါက်ခဲ့လေသတည်း။
ရှမ်းကလေး (ဖတ်ဖူးသော စာအုပ်မှ မှိတ်မိသမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:33 AM No comments:
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက သူဋ္ဌေးကြီးတစ်ယောက်မှ အင်မတန်မှ ချောမောလှပတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့
သူဋ္ဌေးကြီး ကလည်း သူ့သမီးလေးကို တစ်အားချစ်ဆိုပဲ..... ဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆို
ဘယ်သူနဲ့မှ မပေးစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့..... ဒါပေမယ့် အဲဒီရဲတိုက်ကြီးရဲ့မနီးမဝေးမှာ ပန်းဥယျဉ်ကြီးတစ်ခုရှိသတဲ့....
သာယာလှပလွန်း လို့ မြင်သူတိုင်းငေးရတယ်ဆိုပဲ.....အဲဒီပန်းဥယျဉ်ရဲ့ဥယျာဉ်မှုးလေးက လည်း ငယ် ငယ်ချောချောလေးတဲ့......
အဖော် (အပေါင်းအသင်းနော်) မရှိပဲနေရတဲ့မင်းသမီးလေးဟာ.... ပြတင်းပေါက်ကနေ နေ့တိုင်းပဲ ပန်းဥယျဉ်ကြီးကိုငေးငေးကြည့်နေမိသတဲ့..... ပျင်းတာကိုးနော်...
ဥယျဉ်မှုးလေးကလည်း ပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာ ပန်းစိုက်ရင်း သူ့ပန်းဥယျာဉ်ကို ငေးနေတဲ့ မင်းသမီးလေးကို တွေ့ပါလေရော...
မြင်မြင်ချင်းကို ချစ်တယ်ဆို တာအဲဒီကစတာပဲတဲ့
ဥယျာဉ်မှုးလေးကလည်း ပန်းတွေစိုက်ရင်း မင်းသမီးလေကို ပဲပေးတာပေါ့ကွာ.....မင်းသမီးလေကလဲ ပြတင်းပေါက်ကနေ.... အထာပြန်ပေးနဲ့ပေါ့..... တစ်ယောက်နဲ့
တစ်ယောက်သံယောဇဉ်တွေပိုလာကြပါရောတဲ့....... သိပ်မကြာပါဘူး သူဋ္ဌေးကြီးကအဲဒီ အကြောင်းကို သိသွားပါလေရော....
သိ သိ ချင်းပဲ သူသမီးလေးကို ရဲတိုက်ရဲ့ ဟိုး အမြင့်ဆုံ ဖြစ်တဲ့ ဘုံ ခုနစ်ဆင့် မြင့်တဲ့ အထပ်ကို
အဲဒီအချိန်က စ ပြီး မင်းသမီးလေး နဲ့ ဥယျာဉ်မှုးလေးဟာ တစ်နေ့မှ မတွေ့ကြရတော့ဘူးတဲ့.... မင်းသမီးလေးကလဲ
ဥယျာဉ်မှုးလေးကလည်း မင်းသမီးလေးရှိတဲ့ ဘုံခုနစ်ဆင်ကို ရောက်ဖို့အကြံထုတ်ရတော့တာပေါ့
ဒီလိုနဲ့ ဥယျဉ်မှုးလေးဟာ.... သစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကို ယူပြီးမင်းသမီးလေးနေတဲ့ရဲတိုက်နားမှာ စိုက်သတဲ့
ပြီးတော့ သူ့အချစ်တွေသာ စစ်မှန်တယ်ဆိုရင် ဒီသစ်ပင်လေးဟာနေချင်းညချင်းကြီးလာပါစေ ဆိုပြီးဆုတောင်းသတဲ့
သူ့သစ်စာက မှတ်တော့ အပင်လေးဟာ ကြီးလာလိုက်တာ သုံးရက် ကြာတဲ့အချိန်မှာပဲဘုံ ငါဆင့်ကို ရောက်သတဲ့
ဥယျဉ်မှုးလေးဟာ သစ်ပင်ပေါ်တက်.... ပြီတော့ထပ်ဆုတောင်း....ဒီတော့သစ်ပင်လေးဟာထပ်ကြီးလာပြီး ဘုံ ခြောက်ဆင့်ကို ရောက်ပြန်သတဲ့
မင်းသမီးလေးကလဲ သူ့ ချစ်သူလာပြီဆိုတော့ ပျော်တာပေါ့......ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကို တက်မယ်ဆိုပြီါ်.....ဆုထပ်တောင်းဖို့ အလုပ်မှာပဲ
ဓာတ်ကြိုါ်နဲ့မလွတ်တဲ့ထိ အချစ်မကြမ်းဖို့ သင်ခန်းစာယူနိုင်ကြပါစေကွယ်....
Nant Ei Ei Phyu
No.60, Tharyarwaddy Street,
Posted by Shankalay or Sai Sai at 1:41 AM No comments:
တစ်ခါက ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေတဲ့ အချိန်ပေါ့အခန်းတစ်ခန်းမှာ ကောင်လေးကနောက်ကခုံမှာ အရှေ့မှာကစာသိပ်ကြိုးစားတဲ့ကော
င်မလေးတစ်ယောက်ထိုင်တယ်ခုံတစ်တန်းထဲ ကျကြတာ
ရှေ့နောက်ကိုယ့်စာကိုယ်ဖြေရင်း အချိန်စေ့ဖို့ ၄၅ မိနစ်လောက်အလို ခုနကပြောတဲ့နောက်ကကောင်လေးကစာရွက်ကြီးကိုင်ပြီးစာ
ကောင်မလေးက အဲဒီမှာ မေးခွန်းနံပါတ် (၅)ကိုမဖြေတတ်လို့ အခက်တွေ့နေတယ်ကောင်မလေးက ဂုဏ်ထူးတွေဘာတွေ မှန်းထားတာဒီတစ်ပုဒ်ပဲ ကျန်တာ ဖြေဖို့ အစ မေ့နေတယ် နာရီကြည့်တော့ မိနစ် ၄၀လောက်ပဲကျန်တော့တယ် အဲဒါနဲ့
ကြံရာမရတော့ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့နောက်ကကောင်လေးကို လှည့်ပြီး တိုးတိုးလေးမေးတယ်
“ ဟေ့.....နံပါတ်(၅) ပြောပြကြည့်“
“အဲဒီမှာကောင်လေးက နောက်ကနေ တိုးတိုးလေးပြန်ပြောတယ်
ကောင်မလေး စိတ်အရမ်းဆိုးသွားတယ်””အဒါနဲ့သူ့ရှေ့က ကောင်မလေးကိုမေးတော့ မရဘူးပြောတယ် ဆရာမတွေကလဲ မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေတာနာရီကြည့်တော့ မိနစ် ၃၀ လောက်ပဲကျန်တော့တယ် အဲဒါနဲ့ ကောင်မလေးကစိတ်က
ိုလျှော့ပြီး အသံလေးချိုချိုသာသာနဲ့ နောက်ပြန်လှည့်ပြီး
““ ဟေ့ ...ပြောပြလေဟာ နင်ကလဲ နော်””
ကောင်လေးကလည်းပြန်ပြောရှာပါတယ်““ မောင်လို့ ခေါ်ရင်ပြောမယ် ””
ကောင်မလေး တောက်တစ်ချက် တိုးတိုးလေးခေါက်လိုက်တယ် မပြောချင်နေကွာ ဆိုပြီးတင်းခံပြီးစဉ်းစားနေတယ် မရဘူး
နာရီကိုတစ်ခေါက်ထပ်ကြည့်တော့ ၂၅ မိနစ် ပဲကျန်တော့တယ် အဲဒါနဲ့ကောင်မလေးကစဉ်းစားတယ် သူ့ကိုမောင်လို့တစ်ခါ
ခေါ်လိုက်ရင် ကိုယ်ကဘာဖြစ်သွားမှာကျလို့ နောက်တွေ့မှာမှ မဟုတ်တာ ခေါ်လိုက်ရင် ငါ စာတစ်ပုဒ်ရမှာ တန်ပါတယ် ဆိုပြီး
““ သိပ်မကြားရဘူး ”” ကောင်မလေး နှုတ်ခမ်းတစ်ချက်ဆူသွားတယ် စိတ်ထဲမှာလဲကျိန်ဆဲနေပြီ ဒါပေမယ့်စာရဖို့က
ရှမ်းကလေး (ဟာသအားလုံးသည် အလင်းစေတမန်မှ ပေးပို့ ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ )
Posted by Shankalay or Sai Sai at 2:46 AM No comments:
‘ကျွန်တော့်နောက် မလိုက်ရင် ခေါင်းဆောင်ကြီးနောက် လိုက်အောင် လုပ်မှာပေါ့’ တဲ့
Posted by Shankalay or Sai Sai at 2:45 AM No comments:
Posted by Shankalay or Sai Sai at 2:42 AM No comments:
ဖက်ထုပ်လေးနှစ်ထုပ် မင်္ဂလာဆောင်တယ်။ သတို့သားဖက်ထုပ်က ဧည့်သည်တွေကို ပြန်ပို့ပြီးနောက် အိပ်ခန်းထဲဝင်လာတယ်။ ကုတင်ပေါ်မှာ အသားတုံးတစ်တုံးတွေ့တော့ ကြောက်အားလန့်အား ထအော်တယ်။
"အချစ်က လှပရုံတင်မကဘူး မူးယစ်စေတယ်၊ ကြေကွဲစေတယ်၊ မျက်ရည်ကျစေတယ်၊ ဟင်း! မင်းကွာ... ကြက်သွန်နီကိုမှ သွားချစ်မိတယ်လို့!"
"နင့်ကိုငါ စိတ်ညစ်အောင်လုပ်တာတောင် နင်ပြန်မငြင်းခဲ့ဘူးနော်! နင့်ဒေါသကို နင်ဘယ်လို ထိန်းခဲ့တာလဲ!"
ရှမ်းကလေး... (ပို့ ပေးသော သူငယ်ချင်းအား အထူးကျေးဇူးတင်လျက်)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 11:35 AM No comments:
(၁)နင့်ကို ငါပြောတယ် "ငါ ဒီနေ့လှေကားပေါ် တံမြက်စည်းလှဲတာ.. ပြုတ်ကျခါနီးလေးပဲ"
"အိုး.. သတိထားမှပေါ့ မိန်းမရယ်" လို့ နင့်ဆီကနှစ်သိမ့်တာကိုငါမျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်”
"နင် ဖြေးဖြေးမလှဲတတ်ဘူးလား" ဆိုတဲ့အဖြေကိုပဲ ငါရခဲ့တယ်။ ငါဝမ်းနည်းမိတယ်၊ နင် ငါ့ကိုမချစ်ဘူး။ ဂရုမစိုက်ဘူး။”
နောက်တော့ လှေကားကခါတိုင်းထက် သန့်ရှင်းနေတာကို ငါသတိထားခဲ့မိတယ်။ ငါလှဲစရာမလိုအောင် သန့်ရှင်းလွန်းခဲ့တယ်။ နောက်မှသိရတာက အလုပ်မသွားခင် ငါးမိနစ်အချိန်ပေးပြီး ငါ့ကိုယ်စားလှဲခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ နင့်ငါ့ကို ဂရုစိုက်တယ်၊ ချစ်တယ်၊
ဒါက တစ်ခြားလူတွေနဲ့မတူတဲ့ နင်ရဲ့ချစ်နည်းပေါ့။
နင့်ကို ငါပြောတယ် "လမ်းမှာကားပျက်သွားလို့ ကားမှတ်တိုင်ရောက်ဖို့နာရီဝက်ကြာ ငါလမ်းလျှောက်လိုက်ရတယ်"
"တက္ကစီစီးပြီး ပြန်ခဲ့ရော့ပေါ့.. ပင်ပန်းနေပြီလား" ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကိုနင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
"သိပ်မှမဝေးတာ.. လျှောက်ပေါ့။ ဝိတ်လျှော့တာနဲ့ တူတူပဲ" လို့ နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင့်ငါ့ကို မချစ်ဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး
နောက်တစ်နေ့မနက် စားပွဲပေါ်မှာ နင့်ကားသော့ကို ငါတွေ့လိုက်တယ်။ ငါ့အတွက်မနက်စာကို နင်စီစဉ်ခဲ့သေးတယ်။ တကယ်တော့ နင့်ငါ့ကို ဂရုစိုက်တယ်၊ ချစ်တယ်၊ဒါက တစ်ခြားလူတွေနဲ့မတူတဲ့ နင်ရဲ့ချစ်နည်းပေါ့။
နင့်ကို ငါပြောတယ် "ဟင်းကြော်တာ နည်းနည်းတူးသွားတယ်၊ နင်သည်းခံပြီး စားပေးနော်"
"အင်း.. ကိစ္စမရှိဘူး။ နင်ဘယ်လိုချက်ချက် ငါကြိုက်တယ်" ဆိုတဲ့ ကြင်နာသံကိုနင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
"ကြည့်ရုံနဲ့ မစားချင်တော့ဘူး.. စားချင်စိတ်လဲ မရှိတော့ဘူး" လို့နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင့်ငါ့ကို နားမလည်ဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး
နောက်တော့ သွန်ပစ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတဲ့ဟင်းတွေ ပျောက်ပျောက်နေတာကိုသတိထားလိုက်မိတယ်။ နောက်တော့ နင့်နှုတ်ခမ်းဘေးမှာ၊ နင့်အနံ့အသက်မှာ ဟင်းနံ့တွေ ငါရခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ နင့်ငါ့ကို ဂရုစိုက်တယ်၊ ချစ်တယ်၊
နားလည်မှုပေးတယ် ဒါက တစ်ခြားလူတွေနဲ့မတူတဲ့ နင်ရဲ့ချစ်နည်းပေါ့။
နင့်ကို ငါပြောတယ် "ငါ့ဆံပင်တွေ ကျွတ်လိုက်တာ.. ဆရာကတော့ စိတ်မပူနဲ့လို့ ပြောတာပဲ။ ဂတုံးဖြစ်သွားမှာတောင် စိုးတယ်"
"စိတ်မပူပါနဲ့.. နင့်ဆံပင်တွေများနေတာပဲ။ ဂတုံးဖြစ်လောက်တဲ့အထိမကျွတ်နိုင်ဘူး" ဆိုတဲ့ အားပေးသံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
"ကိုယ့်ဆံပင်ကျွတ်တာကို ခုမှသိတာလား၊ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာနင့်ဆံပင်မွေးတွေချည်းပဲ၊ ညစ်ပတ်တယ်" လို့ နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင်
ကိုယ်ချင်းမစာဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ငါဝမ်းနည်းခဲ့မိတယ်။
နောက်တော့ အိမ်ကကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ငါ့ဆံပင်မွေးတွေ အတွေ့နည်းသွားတယ်။ ဆံပင်မကျွတ်တော့ဘူးလို့ ငါဝမ်းသာနေတုန်း နင်ခရီးထွက်ရတယ်။ နင်မရှိမှ ကြမ်းပြင်ပေါ်က ဆံပင်မွေးတွေများခဲ့တယ်။ နောက်မှ ငါမသိအောင် ဆံပင်မွေးတွေကို နင်လှဲခဲ့တယ်ဆိုတာကို ငါသိလိုက်ရတယ်။ တကယ်တော့ နင့်ငါ့ကို ဂရုစိုက်တယ်၊ ချစ်တယ်၊ ငါ့စိတ်ချောက်ချားမှာကို
နင်စိုးခဲ့တယ်၊ ဒါက တစ်ခြားလူတွေနဲ့ မတူတဲ့ နင်ရဲ့ချစ်နည်းပေါ့။
နင့်ကို ငါပြောတယ် "သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းထားလို့ ဒီညအိမ်ပြန်နောက်ကျမယ်နော်"
"ဘယ်သူတွေပါလဲ? သတိထားနော်.. စောစောမပြန်နိုင်ရင် ဖုန်းမကြာမကြာဆက်ခဲ့နော်" ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကို နင့်ဆီက
"နင့်သဘောပဲ.. စိတ်ချမ်းသာသလိုလုပ်" လို့ နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင်ငါ့ကို မချစ်ဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီး ငါဝမ်းနည်းခဲ့မိတယ်။
နောက်တော့ စိတ်တိုတိုနဲ့ နင့်ကိုရွဲပြီး မနက် ၃နာရီမှ ငါအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ဆိုဖာပေါ်မှာ ခွေခွေလေးအိပ်နေတဲ့ နင့်ကိုမြင်မှ
တကယ်တော့ နင့်ငါ့ကို ဂရုစိုက်တယ်၊ ချစ်တယ်ဆိုတာကို ငါသိလိုက်တယ်။ ဒါက တစ်ခြားလူတွေနဲ့မတူတဲ့
နင့်ကို ငါပြောတယ် "ငါ ဟိုဒင်းဖြစ်နေလို့ ဗိုက်အရမ်းအောင့်တယ်"
"သည်းခံလိုက်ပါ၊ တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်ဆို ပြီးသွားမှာပါ" ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
နောက်တော့ အိမ်ကအစားထည့်တဲ့ ဘီရိုမှာ ချောကလက်တွေ ပိုလာတာတွေ့လိုက်တယ်။ နင်ဝယ်လာပြီး နင်မစားခဲ့ဘူး။ မိန်းမသဘာဝမဖြစ်ခင် ငါ့အတွက် နင်ပိုဝယ်ထားတတ်တာကို ငါသတိထားလိုက်မိတယ်။ တကယ်တော့ နင့်ငါ့ကို
ဂရုစိုက်တယ်၊ ချစ်တယ်၊ ဒါက တစ်ခြားလူတွေနဲ့မတူတဲ့ နင်ရဲ့ချစ်နည်းပေါ့။
နင့်ကို ငါပြောတယ် "ဒါနင့်အတွက် ငါရွေးဝယ်ထားတဲ့ အနွေးထည်၊ နွေရာသီမှာ လျှော့ဈေးနဲ့ရောင်းလို့ ဝယ်ခဲ့တာ၊ ခုဆောင်းရောက်ပြီဆိုတော့ ဝတ်လိုက်ပါနော်၊ နင့်အတွက် ငါရဲ့ဆောင်းရာသီ လက်ဆောင်ပေါ့"
"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နင့်အချစ်ကြောင့် ဒီဆောင်းမှာ ငါပိုနွေးထွေးတော့မယ်" ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
နောက်တော့ ဆောင်းကုန်လို့ နွေရောက်တဲ့အထိ အဲဒီအင်္ကျီကို နင်မချွတ်ခဲ့ဘူး။ ရုံးတက်၊ ရုံးဆင်း နေ့တိုင်းနင်ဝတ်ခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ နင့်ငါ့ကို ဂရုစိုက်တယ်၊ ချစ်တယ်၊ ဒါက တစ်ခြားလူတွေနဲ့မတူတဲ့ နင်ရဲ့ချစ်နည်းပေါ့။
နင့်ကို ငါပြောတယ် "ဒီနေ့ နားထောင်ခဲ့တဲ့ ဓမ္မတေးက အရမ်းကောင်းတာပဲ၊ နားထောင်ရင်း ခံစားရတယ်"
"ဘယ်စာအုပ်၊ ဘယ်အခွေထဲကလဲ၊ ငါတို့သွားရှာဝယ်ရအောင်လေ"ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
နောက်တော့ ကက်ဆက်ထဲကနေ ရင်းနှီးတဲ့တေးသံကိုအမြဲ ကြားခဲ့ရတယ်။ စီဒီစင်ပေါ်မှာလည်း ခွေအသစ်တစ်ခွေ တိုးခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ နင့်ငါ့ကို ဂရုစိုက်တယ်၊ ချစ်တယ်၊ ဒါက တစ်ခြားလူတွေနဲ့ မတူတဲ့ နင်ရဲ့ချစ်နည်းပေါ့။
နင့်ကို ငါပြောတယ် "လမ်းထိပ်က ခေါက်ဆွဲသုပ်က အရမ်းစားလို့ကောင်းတယ်"
"ဟုတ်လား.. မနက်ဖြန်ကျရင် ငါတို့အတူတူသွားစားမယ်လေ" ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
"တစ်ချိန်လုံး စားဖို့ချည်းတွေးနေတယ်၊ နင့်ကိုယ်လုံးကို နင်ပြန်အားနာအုန်း" လို့ နင်ပြောခဲ့တယ်။ နင်ငါ့ကို မချစ်ဘူး၊
နောက်တော့ အဲဒီခေါက်ဆွဲသုပ်ကို မကြာခဏ နင်ဝယ်လာတတ်တာကို ငါသတိထားခဲ့မိတယ်။ တကယ်တော့ နင့်ငါ့ကို
နင့်ကို ငါပြောတယ် "နင်နဲ့ရခဲ့လို့ ငါဝမ်းသာတယ်။ နင်ဟာ ငါရဲ့ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ဦးပါ"
"အင်း.. ငါလည်း ဝမ်းသာတယ်။ နင်က ငါရဲ့ဇနီးကောင်းတစ်ဦးပါ" ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက်သံကို နင့်ဆီက ကြားချင်ခဲ့ပေမယ့်
နောက်တော့ ညညမအိပ်ခင် တစ်ရူးနဲ့ ၄ဝလက်မရှိတဲ့ မင်္ဂလာဓာတ်ပုံကို နင်ပွတ်တိုက်တတ်တာကို ငါသတိထားခဲ့မိတယ်။ ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီး နင်ပြုံးနေခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ နင့်ငါ့ကို ဂရုစိုက်တယ်၊ ချစ်တယ်၊ ဒါက တစ်ခြားလူတွေနဲ့မတူတဲ့
နောက်ဆုံး ငါသဘောပေါက် နားလည်ခဲ့ပါတယ်၊ အေးတိအေးစက် ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ နင့်ခန္ဓာအောက်မှာ စကားလုံးတွေနဲ့ မဖော်ပြတတ်တဲ့ နွေးထွေးတဲ့၊ ငါ့အတွက်အချစ်တွေပြည့်နေတဲ့ အသဲနှလုံးတစ်စုံ ရှိတယ်ဆိုတာကို ငါနားလည်ခဲ့တယ်။
ငါ့ကိုနင်ချစ်တယ် ဒါပေမယ့် နင်ဖွင့်မပြောတတ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကလည်း လူများနဲ့မတူတဲ့ ငါ့ကိုချစ်တဲ့ နင်ရဲ့ချစ်နည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်..
အချစ်ကို တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့၊ မြတ်နိုးတတ်ဖို့နဲ့ နားလည်တတ်ဖို့ပဲ လိုတယ်။ ချမ်းမြေ့သောနေ့ ရက်တိုင်းပိုင်ဆိုင်
ရှမ်းကလေး (အီးမေးလ်ကစာကို ပြန်တင်ပြတာပါခင်ဗျာ)... အဲ..နည်းနည်းတိုက်ဆိုင်တာလဲပါပါတယ်။ တစ်ချို့ ယောင်္ကျားလေး တွေဟာကြင်ကြင်နာနာ စကားတွေကို မဆိုတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကြင်နာမှုတွေကို အလုပ်နဲ့ လုပ်သွားတတ်တယ်ဗျ။
ဒါပေမယ့်..မိန်းကလေးအများဖြင့်တော့ ကိုယ့်ကို ကြင်နာတဲ့စကားတွေကို နားထောင်ချင်ကြတယ်။ ယောင်္ကျားလေး အမူအရာနဲ့လုပ်ပြတာကို သိပေမယ့်လဲ ကြင်နာတဲ့စကားတော့ ဘယ်သူမဆိုနားထောင်ချင်မှာဘဲ။
ကျနော်ထင်တာတော့ ဒီပုံပြင်လေးဟာ မိန်းကလေးနဲ့ယောင်္ကျားလေးများ သိထားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မပြောတာကမချစ်လို့ ၊ ဂရုမစိုက်လို့ ရယ်တော့မဟုတ်သလို... အမူအရာနဲ့ လုပ်ပြတိုင်းလဲ နွေးထွေးတဲ့စကားတွေ မပြောလဲရတယ်လို့မထင်စေချင်ဘူးလေ။
ချစ်သူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင်တော့ အမူအရာရော အလုပ်ပါလိုက်ဖက်ဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်ဗျာ။ အဲ... အပြောပဲရှိပြီးတော့ အလုပ်မဖြစ်ရင်လဲမကောင်း ပါဘူးဗျာ။ နည်းနည်းပြောများများလုပ်ဆိုတဲ့ စကားက အချိန်တိုင်းမှန်ချင်မှ မှန်မှာလေ။ ပြောလဲပြော လုပ်လဲလုပ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါမှ ကောင်းမွန်တဲ့ဘ၀ကို လက်တွဲလျှောက်နိုင်ကြမှာ။ )
Labels: Foods for thoughts, humor
ဆရာဝန်- အဖျားကတက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေတော့ အူရောင် ငန်းဖျားဖြစ်မှာစိုးရတယ်။ ထမင်းကအစ အဖတ်ဆိုရင်ဘာမှမစားပါနဲ့ ၊ နွားနို့ ၊ ကော်ဖီ အရည်ဆိုရင်အားလုံး သောက်လို့ ရပါတယ်။
ပြောပြီးဆရာဝန်ကပြန်သွားတော့သည်။ နောက်တစ်နေ့ လူနာဆီရောက်တော့၊ လူနာအဖျားတက်နေသဖြင့်-
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:40 AM No comments:
တစ်ခါကရွာတစ်ရွာမှာ ဆရာနှင့်တပည့်၂ဦး၊ အိမ်တစ်အိမ်မှာအတူနေထိုင်ကြပြီး၊ တပည့်မှာဆရာ့စကားကိုမြေ၀ယ်မကျနားထောင်၍ ရိုးသားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ မှာဆရာကကိစ္စရှိလို့ -" တပည့်ရေ၊ ဆရာအပြင်သွားအုံးမယ် ထမင်းချက်ထားကွာ" လို့ မှာခဲ့ပါတယ်။
ဆရာအပြင်ကပြန်လာပြီး" တပည့်ရေ၊ ထမင်းစားကြရအောင်ခူးကွာ" လို့ ပြောလိုက်တော့၊ တပည့်ကလည်းခူးပြီးတာနဲ့ ဆရာက " ဟင်းကောကွာ" လို့မေးတယ်။ ထိုအခါတပည့်က" ဆရာကထမင်းပဲချက်ထားလို့ မှာတာကို" ဟုပြန်ဖြေတယ်။
ဆရာက အားမလိုအားမရနဲ့ " တပည့်ရာရိုးပါ့၊ ဆရာက 'တစ်' ဆိုရင်၊ တပည့်က 'နှစ်' 'သုံး' အထိစီစဉ်ထားရတယ်ကွ၊မှတ်ထားသိလား လို့ ပြောပါတယ်။
ခဏကြာတပည့်ပြန်လာပြီး ဆရာက-"တပည့်ရေ၊ ဆေးဆရာပင့်ခဲ့ပြီလား" လို့ မေးတော့၊ တပည့်ဖြေလိုက်ပုံမှာ-
" ဆရာကျွန်တော့်ကိုသွန်သင်တဲ့အတိုင်း၊ ဆေးဆရာလည်းပင့်ပြီ၊ နောက်ပြီးအခေါင်းနဲ့ ဘုန်းကြီးပါပင့်လာပါတယ်ခင်ဗျာ"
နေ့ စဉ်ရက်ဆက် တမ်းတမိတယ်။
ဖွင့်ပြဖို့ ခဲ တွေ့ ဆုံချိန်မှာ
ရေစက်ကုန်လို့ခဏဝေးပြီး
ပြန်တွေ့ ချိန်မှာ မင်းကပြုံးလို့ 
နှုတ်လေးဆက်ကာ သူ့ ကိုဖက်ရင်း
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:20 AM No comments: